ဒဂုံရှိငှါးရန်ကွန်ဒိုများ | iMyanmarHouse.com
Central City Condo For Rent
ကြော်ငြာနံပါတ် R-18517922 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
$ 1,300 (အမေရိကန်ဒေါ်လာ)
ကြော်ငြာနံပါတ် R-18517915 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
3 Bedrooms apartment in Yaw Min Gyi Street,Yaw Min Gyi Area near Bogyoke Maket and Junction City , Swimming Pool,Gym and 24 hrs Back up Generator for Just $950/month
$ 950 (အမေရိကန်ဒေါ်လာ)
ကြော်ငြာနံပါတ် R-18530148 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
Close to the Junction City &amp; Bogyoke Market .
ကြော်ငြာနံပါတ် R-18565378 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
Fully furnished condo apartment available for rent in Dagon township
ကြော်ငြာနံပါတ် R-18305829 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ဒဂုံမွို့နယျ ဗိုလျရာညှနျ့လမျး Condo ငှါးမညျ
ကြော်ငြာနံပါတ် R-18570824 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
09423556615 . 09799894395 . 09420010411
Shwe Htake Tann Real Estate Agency ပိတ်ရန်
4 Bedrooms Condo Fully Furnished is Dagon Township .
ကြော်ငြာနံပါတ် R-18570659 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
န၀ဒေးလမ်းတွင် (1500sqft) အကျယ်ရှိအခန်းအမြန်ငှားမည်။
ကြော်ငြာနံပါတ် R-18568850 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
(1250sqft)အကယျြ၊ ဒဂုံ၊ Excellent Condo, အဆငျ့မွငျ့ပွငျဆငျပွီး ကှနျဒိုငှားရနျရှိ
ကြော်ငြာနံပါတ် R-18567540 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
စမုံ Residence တွင် (1600Sqft) အကျယ်ရှိအခန်းအမြန်ငှားမည်။
ကြော်ငြာနံပါတ် R-18567398 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
တက်တိုးနုယဉ်ကွန်ဒိုတွင် (1650sqft) အကျယ်ရှိအခန်းအမြန်ငှားမည်။
ကြော်ငြာနံပါတ် R-18563498 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကြော်ငြာနံပါတ် R-18560148 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကြော်ငြာနံပါတ် R-18557761 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
17 သိန်း (ကျပ်)
ကြော်ငြာနံပါတ် R-18552170 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ဒဂုံမြို့နယ်သည် ရန်ကုန်မြို့၏ အထင်ကရပေါင်းများစွာနှင့် ရာဇဝင်သမိုင်းကြောင်းအများဆုံးရှိသည့် မြို့နယ် တစ်ခုဖြစ်သည် ။ ရန်ကုန်အစ ဒဂုံကဟုပင်ခေါ်တွင်ရလောက်သည်အထိ သမိုင်းတွင်သည့် မြို့နယ်တစ်ခု ဖြစ်သည် ။ ရပ်ကွက်ပေါင်း (၅) ခုဖြင့်တည်ဆောက်ထားသော ဒဂုံမြို့နယ်သည် အကျယ်အဝန်း ၁၂ ကီလိုမီတာရှိပြီး မြောက်ဘက်တွင် ဗဟန်းမြို့နယ် ၊ အနောက်ဘက်တွင် အလုံမြို့နယ် ၊ အရှေ့ဘက်တွင် မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်မြို့နယ် ၊ တောင်ဘက်တွင် လမ်းမတော်မြို့နယ် ၊ လသာမြို့နယ်နှင့် ပန်းပဲတန်းမြို့နယ်တို့ တည်ရှိသည် ။ ရန်ကုန်မြို့၏ အထင်ရှားဆုံးဖြစ်သော ရွှေတိဂုံစေတီတော် ၊မဟာဝိဇယစေတီတော် ၊ အမျိုးသားပြတိုက် ၊ အမျိုးသားပြဇာတ်ရုံနှင့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အမျိုးသားလွှတ်တော် အဆောက်အဦး တို့သည် ဒဂုံမြို့နယ်တွင်တည်ရှိသည် ။ မြန်မာပြည်၏ ထပ်တန်းနာမည်ကြီး အထက်တန်းကျောင်းများဖြစ်သည့် အ.ထ.က(၁) ၊ အ.ထ.က(၂) ဒဂုံကျောင်းများလည်းတည်ရှိသည် ။ မြို့နယ်တွင်း နာမည်ကြီး တော်ဝင်ဈေးဝယ်စင်တာကြီးလည်းရှိပြီး သီတဂူဆရာတော်ဖွင့်လှစ်ထားသည့် သီတဂူအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဗုဒ္ဓဘာသာသင်တန်းကျောင်းလည်း ဒဂုံမြို့နယ်တွင်တည်ရှိသည် ။ ဒဂုံမြို့နယ်သည် စည်ကားထွန်းကားသော အထင်ကရနေရာကောင်းများကြောင့် သံရုံးများ ၊ ဟိုတယ်များ နှင့် သံတမန်ဝန်ထမ်းအိမ်ရာများစွာလည်းတည် ရှိသည် ။ အဆင့်မြင့်ကွန်ဒိုများလည်းတည်ရှိပြီး လူသိများ သက်တမ်းရင့် သမ္မတရုပ်ရှင်ရုံတည်ရှိသည့် မြို့နယ် တစ်ခုလည်းဖြစ်သည် ။ အချုပ်အားဖြင့်ဆိုသော် ဒဂုံမြို့နယ်သည် ရန်ကုန်၏သမိုင်းကြောင်းအစမြို့နယ်တစ်ခု ဖြစ်ခဲ့ပြီး ဟိုရှေးယခင် ရွှေတိဂုံစေတီတော်အနီးတည်ရှိခဲ့သည့် ရွာငယ်လေးဖြစ်ခဲ့ပေမယ့်လည်း ယခုအခါတွင် ရန်ကုန်မြို့၏ ထင်ရှားကျော်ကြားသော အချက်အချာပေါင်းများစွာဖြင့် ပြည့်နက်သည့်မြို့နယ်တစ်ခုဖြစ်သည် ။